Hotel Transylvania (3) ရုံတင်ပြီဆို ကြည့်ကြမယ်မို့လား? (1) နဲ့ (2) ကလဲ ကလေးလူကြီးအားလုံး သဘောကျလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ကာတွန်းကားလေးဖြစ်ခဲ့တာပဲလေနော် ။ ဒီတခေါက်ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာတော့ ဒရက်ကူလာမလေး Mavisဟာ သူ့ရဲ့အဖေ အနားယူနိုင်ဖို့ဆိုပြီး Monster သဘောင်္ကြီးနဲ့ မိသားစုပင်လယ်အပျော်ခရီး ထွက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ သူ့အဖေ ကို Suprise လုပ်တာပေါ့လေ ။ ဒီခရီးမှာပဲ ဖခင်ဒရက်ကူလာကြီးနဲ့ သဘောင်္ကပ္ပတိန်မမ Ericka တို့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးစတင်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာတော့ Mavis တယောက် သဝန်တိုရပါပြီ ။ Ericka နဲ့ သူ့အဖေကိုခွဲဖို့ Mavis ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တွေ ထုတ်ပြီးဘယ်လိုတွေတောင် ကြိုးစားမလဲ ။ ? သမီးဖြစ်သူ Mavis နဲ့ သမက်ကို ခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဖခင်ဒရက်ကူလာကြီး ဘယ်လိုတွေ ဝဋ်လည်မလဲ ။? ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ပြသပေးနေပါပြီနော်...
ဒါရိုက်တာ Genndy Tartakovsky